Ahlu Sunna oo ka hor-timid doorashada madaxweynaha Galmudug ee dhawaan la qabanayo, Sabab! +(War-saxaafadeed) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ahlu Sunna oo ka hor-timid doorashada madaxweynaha Galmudug ee dhawaan la qabanayo,...
Ahlu Sunna oo ka hor-timid doorashada madaxweynaha Galmudug ee dhawaan la qabanayo, Sabab! +(War-saxaafadeed)
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – War qoraal ah oo ka soo baxay madaxa Xukuumadda Galmudug, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa lagu sheegay in aysan qeyb ka aheyn Doorashada madaxweynaha Galmudug iyo ku xigeenkiisa ee dhawaan ka dhici doonta magaalada Dhuusamareeb.
Sidoo kale, qoraalkan ayuu Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, ku sheegay, in dowladda Federalka Soomaaliya ay deegaannada Galmudug ka waddo doorasho afduub ah.
Ahlu Sunna oo ku gacan seyrta
ka qeybgalka doorashada madaxweynaha Galmudug